Enye yezinkinga ezivamile ezibhekene iningi abanikazi izimoto zasekhaya ebusika - kuba njalo isitofu lutho. Le nkinga haunts Sebawoti Vaz kusukela 70s kwekhulu elidlule. Ngokudabukisayo, usenesikhathi heater njalo kancane washintsha ngokuya nokwethenjelwa. Kodwa uma inkinga wathinteka futhi udinga ngokushesha siyixazulule.
Futhi namhlanje sazi, kungani ku Vaz-2114 akusho usebenze isitofu futhi kanjani ukuxazulula le nkinga.
Kuthiwani uma heater heats kabi noma ingasebenzi nhlobo?
Lapha sibheka imbangela eyinhloko yenkinga nezindlela ukubhekana nabo. Isizathu okungenzeka kakhulu ukuthi akusebenzi isitofu Vaz-2114 - kuyinto thermostat okuyiphutha. Uma lesi sici akuyona ukusebenza, uhlelo lizoqhubeka ukushayela uketshezi lwaluyophola kuphela kumbuthano ezinkulu, ngenkathi kugwenywa encane. Isixazululo sale nkinga, ukufaka thermostat entsha, njengoba ukulungisa elidala eside futhi akusizi ngalutho.
Airlock njengoba kubangelwa ukwehluleka heater
Air ephaketheni - lena Isizathu sesibili ukuthi akusebenzi isitofu. Vaz-2114 - imoto ezingalindelekile, futhi ngezinye izikhathi ohlelweni ukupholisa ezingavela angabiki. Kwenzeka kanje: ngemuva kokuhlinzwa injini ngesikhathi lwaluyophola emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni, ingxenye engenhla kurediyetha ukupholisa ugcwele emoyeni. uhamba Kugcine kuya thermostat. Ekuseni etholwe ukuze ngemuva kokuqala futha imoto kuleli matrix jaha emoyeni heater (ke umelwe ngezansi).
abashayeli abaningi ukuxazulula le nkinga ngendlela elandelayo: ahlubule ipayipi isitofu bese kancane kancane isipikili kuze kube esiphezulu lapha emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni.
Kuthiwani uma kuhhavini Vaz-2114 wayeka ukusebenza? Isitofu iqhude yakhe
Iphutha noma ngomsebenzi omubi heater ingaphakathi ingase ibangelwe kuhovini Thepha (uma akawuvuli kuze kube sekupheleni). Indlela ukuxazulula le nkinga? Okokuqala, nivuse isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ikhebula. Tuck it udinga kusukela namafutha. Ukuze sibone ukuthi uyodonsela, ungakwazi ukudonsa ukuba impintshisi zakhe. Uma empompini ayivulwanga, cishe, it is oxidized. Kulokhu, ukushintsha ngokuphelele.
isitofu kukora kurediyetha ingabagulisa-non-ukusebenza i-heater. Lapha kubalulekile ukususa le ucezu futhi ngokucophelela nishaye ngayo-vacuum cleaner.
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi futha ayikwazi ukwakha ingcindezi ezidingekayo ohlelweni. Lokhu kwenzeka lapho angenzi lutho heater kubanda futhi eziqhutshwa ngesivinini. Lezi izimpawu zingase zibonise ukuthi ezingeni eliphansi kokupholisayo okuqukethwe ohlelweni. Ngokuvamile, abashayeli ukukhwezwa duralumin futha esikhundleni standard. Okusanda lalibukeka ngayo izitolo eziningi elinegazi, ngakho qaphela kakhulu lapho ukhetha. Ukuze siqiniseke, cela nomthengisi isitifiketi enamathiselwe kule nqwaba imikhiqizo. By endleleni, abanye abakhandi besiliva ukubeka isifutho ezengeziwe kagesi kusukela iNsephe.
Njengoba for ezingeni eliphansi emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni, lapha izinto lula kakhulu. Uma ezingeni kokupholisayo akuyona ezingeni esiphezulu (kodwa lokhu akufanele kube ebusika), engeza kancane ngaphezu kokupholisayo-MAX ithegi.
Ngezinye izikhathi kokupholisayo ungakwazi ukunuka uphethiloli. Uma kunjalo, cishe, uke wokushiswa isilinda ikhanda gasket. Kulokhu, kufanele esikhundleni salo. Kuwufanele ke azibizi kakhulu, futhi ngempela esikhundleni ngeke kuthathe imizuzu engaphezu kuka-10 isikhathi. I pad kakhulu efanayo ihlukile - kusuka 10 kuya kwezingu-40 amakhilomitha, kuye ngokuthi umenzi kanye nokusebenza imoto.
Uma kuhhavini ayisebenzi, Vaz-2114 udinga ukuhlola odla gumbi zokuhlunga. Kukhishwe silula. Kuso sonke isikhathi sokusebenza isici cishe 10-15 izinkulungwane amakhilomitha. Uma ngalesi sikhathi akuzange kuyishintshe, cishe, isizathu itholakala lemifanekiso ivimbekile.
isitofu fan ayisebenzi - yini okumele ngiyenze?
Qonda ukuthi fan ngeke uvule, kanje. Okokuqala, ukuqala injini bese uvula heater. Uma isitofu isidlulile ukwenza umsindo, njengoba kwakunjalo ngaphambili, kusho ukuthi le nto ayiphelele.
Ngokuvamile, le fan ayisebenzi ngenxa fuse wokushiswa. Ngomhla ka-14, "Ladakh" ubeke 30-ampere fuse F7. Itholakala ngokushesha ngemva kwesitofu.
Uma kuhhavini ngezikhathi ezithile "ikalishi" (lusebenza kuphela nge injini efudumele), kusho ukuthi i-edluliselwe ndaba ukuthungela. Kwenzeka futhi ukuthi fan akusebenzi ngenxa contact abampofu e block obandayo. Oxides noma xhumana abampofu, kanye fuse kuyinkinga eyejwayelekile ukusebenza kwe-heater. Lapha sidinga hambisa kancane isixhumi eya block noma uhlole izinga oxhumana nabo.
Inqamuka ngokusebenzisa fan Resistor. Qonda kungcono nje - kuhhavini izovuleka kuphela isigwedlo 3-isikhundla. Kulokhu, uchungechunge Resistor ukushintsha ngokuphelele. Ngakho sasisuke kungani ungazami ukuba isitofu Vaz-2114.
Dodge Ishaja, ukubuyekezwa kanye izici
Izimoto Geely - lula nenduduzo ngenani lentengo elikahle
Iqembu lebhola le-Football - I-Serie A nokuningi
Pentax K-50: izibuyekezo, izithombe, ukubuyekeza